Vivo Y50 Starry Black (8GB/128GB)-19 ~ ICT.com.mm
HomeVivo Y50 Starry Black (8GB/128GB)-19
Vivo Y50 Starry Black (8GB/128GB)-19
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display: 6.53 inches Resolution: 2340 × 1080 (FHD +) CPU: Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) Chipset: Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm)... [Learn more]
Brand: VivoSKU: 155515N/ASee more: Mobile Phones, New Arrivals, Products, Shop, VivoFilter by: Smartphones
Resolution: 2340 × 1080 (FHD +)
Vivo Y50 က အမိုက်စား စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ပါဝင်တဲ့ ဘက်စုံသုံး စွမ်းရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းကောင်း တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့မျက်နှာပြင်အပြည့်ဒီဇိုင်းပုံစံသစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဘေးဘောင်နဲ့ နောက်ကျောကာဗာအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပလတ်စတစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အပေါ်မှန်မျက်နှာပြင်အတွက် Gorilla Glass ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ အတွင်းမှန်မျက်နှာပြင်အတွက် IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.53” ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Resolution က (Full HD+) 1080 x 2340 pixels, 20:9 ratio (~403 ppi density) အထိ ရရှိတဲ့အတွက် တကယ့်ကို လှပတဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ OS အဖြစ် Android 10 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပြီး User Interface အဖြစ် Funtouch 10.0 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ System ပိုင်းမှာ နာမည်ကျော် Snapdragon ရဲ့ Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset နဲ့ 2.0 GHz Octa-core Processor တို့ကို တွဲဖက်ပေးထားပြီး ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် Adreno 610 (GPU) ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဘယ်လို App မျိုးကိုမဆို သွက်သွက်လက်လက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ System အတွဲအဖက်ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်လည်း လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ Internal Storage – 128GB ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒေတာတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ RAM 8GB ဖြစ်တဲ့အတွက် Playstore မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်လို App မျိုး Game မျိုးကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Apps တွေကို အထစ်အငေါ့မရှိ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်စေဦးမှာပါ။ နောက်ကျောဘက် ကင်မရာစနစ်အတွက် 13MP (wide) + 8MP (ultrawide) + 2MP (macro) + 2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ လှပတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ Portrait ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်သလို ညဘက်မှာ အလန်းစားပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Super Night Camera Mode လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးချိန်မှာလည်း လျင်မြန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဝေဝါးမှုမရှိဘဲ ကြည်ကြည်လင်လင် ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ ကင်မရာစနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ 16MP Selfie ကင်မရာကို အသုံးပြုပြီး အချိန်တိုင်းမှာ လှပတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ Finger Print ကို ပုံမှန်အတိုင်း နောက်ကျောဘက်မှာပဲ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Apps တွေနဲ့ ဂိမ်းတွေကို အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အသုံးပြု/ကစားနိုင်မဲ့ Multi-Turbo 3.0 နည်းပညာ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားချိန်မှာ Screen Capture နဲ့ Screen Recording ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပါဝင်တဲ့ Ultra Game Mode လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ 5000mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Fast Charging 15W (Type-C) ဖြင့် အားပြန်သွင်းပေးနိုင်မှာပါ။ အရောင်ကွဲအဖြစ် အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင် တို့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
i View Display Attractive View
The 6.53-inch iView Display makes the front camera smaller and more immersive to capture exciting images. It hasa90.77% screen-to-body ratio, with an amazing 19.5:9aspect ratio anda2340x1080 FHD + resolution. The interface of the application is designed specifically to takeastep toward perfection, and you getasmoother screen experience. The Y50 is sure to give youacaptivating view.
A captivating 3D Colors aesthetic
The detailing of the Y50 has been detailed in the design of the Y50. The delicate 3D aspect ratios are carefully designed and framed to create seamless lines that are extremely rare. Light waterfalls such as the waterfall fall into fine layers, and the magnificent Pearl White colors and the majestic Starry Black colors complement the high-end artistry.
Multi-Turbo 3.0 is upgraded to the flagship VPG (vivo Process Guardian) technology of the smartphone industry and is equipped with AI Turbo to set up the Center Turbo and performance enhancements for key system control for seamless acceleration. It predicts system malfunctions that may be caused by other external applications and prevents them before they occur. 75% optimized for specific system malfunctions and reduce friction for specific external applications.
The AI ​​Turbo offers faster speeds through intelligent scheduling. It also predicts an application strategy and enables AI to use up to 20% faster applications using AI pre-loading.
The upgraded Ultra Game Mode provides even more fun features like Fast Screen Capture and Screen Recording. Game Vibration It also updates your favorite features like Voice Changer and Killer Countdown.
Super Wide-Angle Quad Camera toasharper image
Touch the four cameras to snapanew image and get it.The 13MP main camera provides maximum resolution.An 8-megapixel wide-angle camera lens lets you capture 120-degree panoramic views so you can capture more pictures withawider view.The 2MP Macro helps you getacloser look at the beautiful world from morning dew to full honeymoon.The 2MP Bokeh camera separates the background and the subject intoaportrait, so you will be able to see in the clear.
The Super Night Camera More brightness
The super-efficient Super Night algorithm automatically eliminates noise and dots when shooting at night. This will give youabrighter, clearer result, and the shades will look different. It also supports front and rear cameras, so you can capture crisp images in the evenings and see the magical beauty.
Watch mobile videos in close proximity to movie screens. When you shoot video, the natural vibrations that the smartphone's top stabilization algorithm and motion sensor can accurately measure up to in millimeters.
16MP front camera.Beautiful selfies
The 16MP front-facing camera with Face Beauty will be able to create your beautiful moments without the effort.
Total price:K425,109 K401,283
This item: Vivo Y50 Starry Black (8GB/128GB)-19 K365,542